Fikasan-tsary miafina miafina mini (SPY006) | Vahaolana OMG
Hidden Mini Spy Camera (SPY006)
Ny fakan-tsary miafina Mini dia fakan-tsary faran'izay kely indrindra eto an-tany. Fampiharana: Surfing, Hiking, Driving bisikileta fanatanjahan-tena, moto, Lanyard rojo sns.
Super Long recording tahirintsary: Naorina-in 800 mA Lithium batterie, horonam-peo maharitra horonan-tsary 9 ora.
Nihetsika ny feo sy ny fihetsiketsehana: MOtion dia mavitrika ny fandraisam-peo, feo na feo mihetsika mafampana ary misy horonan-tsary manomboka izay afaka mijanona andro 6, tonga lafatra toy ny fakan-tsary na fakan-tsary fakan-tsary. Ny feo mihetsi-po be dia be atao, ny fakantsary dia manomboka manomboka rehefa ny feo manodidina ny fakantsary dia mihoatra noho ny 60 decibels (feo na feo mandeha).
FULL HD 960P Kamera:
Video Fanapahan-kevitra: 1280x960P;
Image Fanapahan-kevitra: 1.3MP (1280 × 1024 VGA).
Tena kely sy malefaka, mikraoba mikraoba: PC Shell, LWH: 2.3 × 0.9 × 0.6 santimetatra; Net: 25g; Famolavolana paikady, Portable portable DV DC, Anti-Shake; tohano ny karatra TF hatramin'ny 32GB. Fanohanana ny firaketana ny cyclic.
Ny fakan-tsary kely kely indrindra: LWH ： 2.3 × 0.9 × 0.6 inch.
Mpiasa tsara tarehy tsara tarehy, mitondra vokatra matevina sy fihenam-peo HD.
Built-in 800 mA lithium batteries, horonam-peo maharitra horonan-tsary 9 ora.
Voasoratra mihetsika mihetsika.
Famahana horonantsary HD: 1280x960P; Famahana sary: ​​1.3MP (1280 × 1024 VGA)
Vitsy sady vitsy kely, ka afaka manafina azy mora foana ianao raha tsy voamarikao. Birao, fitsangatsanganana, fivarotana, trano fonenana ho an'ny fampiasana hafa (ankizy, biby fiompy, nitaiza, antitra).
Voasakana ny fanoratana ny loop mba handika ny antitra indrindra amin'ny rakitra video (10-minitra).
Ny hery enti-mody, dia mitondra ny fihenanam-pahefana faran'izay ambany sy ny fotoana fanoratana maharitra.
Web Camera: Fanohanana fotsiny eo ambanin'ny rafitra Windows8.
Fanampiana amin'ny famandrihana raha ilaina (mila mifandray amin'ny USB plug).
Satria ny vokatra dia ho an'ny HD DV, ny haben'ny heriny dia mihoatra noho ny an'ny famaritana ny fari-pitsipika mahazatra.Ny mahazatra dia mety ho mafana ny fampiasana azy. Tsy manahy momba ity olana ity. Ny vokatra dia nandalo fitsapana henjana ary ny kalitao dia tonga lafatra.
Azafady aza ampiasao ny asan'ny Voice & Motion Activated amin'ny tontolo be tabataba, tsy hisy vokany izany.
Mampahatsiahy ihany koa izahay fa mila mamerina azy io ianao raha tsy miasa amin'ny fampiasana azy.
Tsy misy WIFI ity fakantsary ity, azafady mampidiho karatra memoire amin'ny mpamaky karatra hijerena lahatsary
Ity fakantsary ity dia tsy misy karatra sd, mila mividy misaraka ny karatra fahatsiarovana ianao
Volavola kely indrindra, azonao atao ny mametraka ireo fakan-tsary miafina amin'ny fitoeram-boky, latabatra na amin'ny toerana hafa izay toa tsy dia hita loatra hiarovana ny tranonao, ny fianakavianao ary ny orinasanao.
Ampiasao ny fiarovana ny trano sy ny orinasa: fanaraha-maso mpitsikilo amin'ny fotoana tena izy toy ny Nanny cam, cam cam mba hijerena ny zanakao kely sy ny biby fiompinao, ny fiarovana an-trano, ny fanaraha-maso ny asa miafina.
Pikantsary mahomby 1.3MP
Sary: jpg; AVI video format
Video Resolution 1280 × 960 30fps
Rafitra fampandrenesana: window-tohizo fotsiny 10 (inclcde) ambany sy MAC
Manohana ny karazana TF; Manohana an'i Max. Capacity: 32GB (tsy misy)
Battery Charging Time: 2-3 ora
Hidden Mini Spy Camera (SPY006) no farany niova: Oktobra 9th, 2019 by Admin
5520 Total Views 7 Views Today